Shirka Bilaha Ah Gudiga Maamulka Rugta ganacsiga Puntland – Puntland Chamber of Commerce
Shirka Bilaha Ah Gudiga Maamulka Rugta ganacsiga Puntland
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	9th March 2016
Shirka gudiga maamulka Rugta ganacsiga Puntland ayaa waxaa shir gudoominayey Gxigeenka 1ad ahna Kusimaha Gudoomiyaha Maxamed Cabdi Waaberi. Shirkan ayaa si qota dheer looga hadlay xaaladda Ganacsiga Puntland, Warbixino laga dhegaystay Shirkadii qalabaynaysay Carwada iyo Kulankii dhexmaay Hay’ada Shuraako iyo Wafdigii Rugta ganacsiga Puntland.
Madaxa Mashaariicda Rugta ganacsiga Maxamed Maxamud Cisman ayaa ka warbixiyey shir sadex maalmood ka socday magaalada Hargeisa oo looga hadlayey Kor uqaadista Tamarta Soomaaliya (Somali Renewing Energy) ayna waday Hay’da Shuraako. Wuxuuna sheegay in ay muhim tahay ka faaidaysiga Tamarta iyadoo la eegayo faaidooyinka ay uleedahay bulshada iyo sidii loo yarayn lahaa khasaaraha ka iman kara hadii la waayo Shidaalka ay istcimaalan shirkadaha koronto.
Maxamed M. Cisman wuxuu sidookale warbixin kabixiyey shirkii garowe ka qabsoomay — looguna magac daray Enhancing Somali Livestock (ESOLT) kaasoo looga hadlayey sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa xoolaha soomaaliya ayna iska kaashanayeen Wasaaradda xanaanada xoolaha soomaliya iyo AU-IBAR wuxuuna Maxamed Cisman xusay sida ay muhiimad balaaran uleedahay in lahelo xoolo leh qiima siman iyo hab casri ah oo lagula socdo suuqa xoolaha soomaliya.
Sidoo kale waxay gudiga maamulku warbixin ka dhegaysteen Shirkadii kuhawlanayd qalabaynta carwada 2aad, Cabdirisaq Sicid Farax oo ah maamulaha shirkada ayaa sheegay in ay soo baxday doonidii siday qalabkii carwada dhowaana ay soo gaarayso dekeda Bosaso islamarkaana gudiga qabanqaabadu la wareegi doonaan.
Gudiga Maamulku waxay warbixino ka dhegaysteen gudiga qabanqaabada carwada iyagoo aad usoo dhoweyey habka ay usocoto waxayna ganacsatada Puntland ugu baaqeen in ay u diyaar garoobaan.